Isku aadka wareegga 16ka tartanka UEFA Champions League ayaa la sameeyey. – Cayaaraha dunida
Isku aadka wareegga 16ka tartanka UEFA Champions League ayaa la sameeyey.
Isku aadka wareegga 16ka tartanka UEFA Champions League ayaa la sameeyey maanta oo Isniin ah, waxaana kasoo baxay ciyaaro xiiso leh.
Real Madrid vs Paris Saint-Germain, Chelsea vs Barcelona iyo Juventus vs Tottenham Hotspur waa seddax ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee kasoo baxay isku aadka wareegga labaad ee tartanka UCL.
Waxaan halkaan kusoo qaadan doonaa taariikh kooban ka dib markii la sameeyey isku aadka tartanka UCL, taasoo ku saabsan kooxaha isku beegmay.
Kooxda FC Basel ee dalka Switzerland ayaa waxaa laga adkaaday afar ka mid ah 14 kulan oo tartanka UEFA Champions League ay ku wajahday kooxaha Ingiriiska ah, iyadoo adkaatay shan jeer, barbardhac la gashay shan jeer, afar jeerna laga adkaaday – sidaas darteed Manchester City dhibkeedu ma yara.
Juventus ayaa laga saaray tartamada Yurub shantii jeer ee ugu dambeysay ee ay ku beegantay koox ka dhisan England – sidaas darteed Tottenham waxay ku beegantay koox ay Ingiriisku ka fiicnaayeen sannadihii ugu dambeeyey.
Chelsea ayaa lix jeer wajahday kooxda Barcelona marka laga hadlayo wareegyada bugbaxda tartanka UEFA Champions League, waxaana labadaan kooxood ka kulamo badan Bayern Munich iyo Real Madrid oo sideed jeer ku kulmay wareegyada bugbaxda tartanka UCL – sidaas darteed waa kooxo isgaranaya Blues iyo Barca.
Isku aadka wareegga 16ka tartanka UCL oo dhammeystiran
Barcelona ayaa wareegga xigga ee tartanka UEFA Champions League usoo gudubtay lix ka mid ah todobadii jeer ee ugu dambeysay ee ay heerka bugbaxda ku aaday koox England ah, laakiin kooxdii ugu dambeysay ee England ka dhisan ee ay kasoo bixi weysay waxay aheyd Chelsea oo ay heerka semi-finalka tartankaan ku kulmeen xilli ciyaareedkii 2011 illaa 2012.
Lionel Messi ayaa sideed jeer wajahay kooxda Chelsea isagoo aan hal gool ka dhalin kuna gamay 29 darbo, waana kooxda uu ka heysto rikoorkiisa ugu xun ee dhanka gooldhalinta taariikhdiisa kubadda cagta oo idil.
Ciyaaraha lugta koowaad ee wareegga 16ka tartanka UEFA Champions League ayaa waxaa la ciyaari doonaa 13ka, 14ka, 20ka iyo 21ka bisha Febraayo ee sannadka soo aadan, halka kulamada lugta labaad ee wax walba go’aamin doona la ciyaari doono 6da, 7da, 13ka iyo 14ka bisha March ee sannadka soo aadan.